Pyay Ti Oo + Eaindra Kyaw Zin Offer Food to Monks @ Maha Si Monastery | Myanmar Celebrity Couple Photos
Pyay Ti Oo + Eaindra Kyaw Zin Offer Food to Monks @ Maha Si Monastery
Here are the photos of Myanmar famous Actors; Pyay Ti Oo and Eaindra Kyaw Zin who offered food to the monks and nuns to bless their marriage at Maha Si Monastery on today morning (15 January 2011). Pyay Ti Oo and Eaindra Kyaw Zin will hold the Ceremony of Binding the hands of the Bride and Groom on the way of Myanmar traditional marriage style on 16 January 2011 at Sedona Hotel, Yangon. Myanmar famous Celebrity Couple : Pyay Ti Oo and Eaindra Kyaw Zin
Actor Paing Zay Ye Htun's Couple
Actress Myo Thiri Kyaw's Couple
ဒီကနေ့ (ဇန်န၀ါရီလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၁) မဟာစည် သာသနာ့ရိပ်သာမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပြေတီဦး နှင့် အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးပွဲမှ ဓာတ်ပုံ တချို့ပါ။ ပြေတီဦး နှင့် အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ဟာ မနက်ဖြန်ခါ (ဇန်န၀ါရီလ ၁၆) တွင် စုလျားရစ်ပတ် ဘိတ်သိတ်မင်္ဂလာ ကို Sedona Hotel မှာ ကျင်းပဖို့ရှိလို့ သိရပါတယ်။
mayJanuary 15, 2011 at 1:37 AMHow can i say. :((((((((((((((((((((((((((((((:)((((((((((()))))))))))))))))):)))))))))))ReplyDeletesabaiJanuary 16, 2011 at 12:10 AM၀မ်းသာပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်မင်္ဂလာပွဲတွေအများကြီးလုပ်နေတာ ပိုက်ဆံတွေတော်တော်ကုန်မယ်နော် အဲလိုမဟုတ်ဘဲ မရှိဆင်းရဲသားတွေကိုလှူ ၊ AIDS ရောဂါသည်တွေကိုလှူလိုက်ရင်တော်တော်အကျိုးရှိမယ်နော်ReplyDeletePan NuJanuary 16, 2011 at 2:54 AMသူတို့ပိုက်ဆံမကုန်ပါဘူး။ စပွန်ဆာတွေက လုပ်ပေးတဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေပါလို့ ပြောထားတာပဲလေ။ သူတို့က ကြော်ငြာရိုက်နေတဲ့သဘောပဲ။ အဲဒါကြောင့် လှူဖို့ပြောရင် သူတို့စပွန်ဆာတွေကိုပဲ ပြောသင့်ပါတယ်။ သူတို့နာမည်မရှိရင် ဘယ်စပွန်ဆာမှ သူတို့ကိုအီးလှည့်ပေါက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့က ရတဲ့အခွင့်အရေးကို အကျိုးရှိအောင်အသုံးချတဲ့သဘောပဲ။ အမှန်က သူတို့အတွက်လဲ အလကားမင်္ဂလာဆောင်ရ၊ အသံလွှင့်ရာက ရတဲ့အကျိုးအမြတ်ကို လှူလို့ရ၊ စပွန်ဆာတွေကလဲ သူတို့ပစည်းတွေကိုကြော်ငြာလို့ ရတဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးရှိတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ပဲ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့ကိုလူတွေက အမြင်ကတ်လာတဲ့ အခြေအနေမျိုးမို့ သူတို့အတွက် အကျိုးယုတ်လာတဲ့ အနေအထားလို့ မြင်ပါတယ်။ReplyDeleteThan ThanJanuary 21, 2011 at 8:21 AMThat is right what you said Pan Nu.We all agree with you.Now, people are suffering for foods, weather and government.Within the those situation, they don't understand what they doing.The bride, she is so stupid even though who she is or not.They want people to flatter for them and over action.Fuck bride.ReplyDeletemamyaMarch 1, 2011 at 5:51 PMဟေး သန်းသန်း ကိုယ့်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ကြော်ငြာ နေဒါလားReplyDeletemamyaMarch 1, 2011 at 5:58 PMမသိလို့ မေးပါရစေအမြင်ကတ် ရလောက်အောင် သူတို့နှစ်ယောက်က ဘာတွေလုပ်လို့လဲကိုယ့်အမြင် မှာတော့ကောင်းနေဒါဘဲ့ReplyDeleteAdd commentLoad more...